‘पैसा कमाउन स्टेज चढ्नैपर्छ’-Nagarikaawaj.com
‘पैसा कमाउन स्टेज चढ्नैपर्छ’
गितसंगितको अवस्था अझै पुर्ण रुपमा सच्चिसकेको छैन । कलाकारहरुले निकै मिहेनत गरेर गित गाउँछन पारिश्रमिक सोचेअनुरुप पाउदैनन्, गितसंगितका प्रोड्युसरले लगानी खर्चिन्छन् आउने वाटाहरु सिआरविटीवाट सोचेजति आउदैन, सिडी, भिसीडी किन्दैनन श्रोताहरु । यस्तै छ, गितसंगितको अवस्था गित वन्न छाडेका छैनन, म्युजिक भिडीयो निर्माण पनि रोकीएको छैन, तर सोचेजति राम्रो पनि यो क्षेत्रमा आएका कलाकारहरुलाई छैन । स्याङ्जा मा जन्मिएका र वाल्यकाल त्यतै विताएका यि गायकसँग यसै विषयमा गितसंगित एरियाभित्र रहेर गायक कृष्ण काफ्लेसँग रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको एक्स्ट्रा गफगाफ आजको अकंमा ।
गायक भन्दै हिड्नुमा कत्तिको गर्व लाग्छ ?
– लागिहाल्छ नी गर्व त । नेपालको गितसंगितलाई दिनरात माथी उठाउनका लागी मैलेपनि केही योगदान दिएको छु, दिदैछु भन्नेमा अलिकति खुसी पनि लाग्छ । तर यसैगरि सोचिदिने मान्छेको कमि भयो यहाँ ।
– अलिकति स्वार्थ वटुल्नका लागी आउनेहरु यहाँ धेरै छन् । पैसा हुदैमा गायक हुने, गित निकाल्ने अथवा यस्तै यस्तै । तर जुन खालको शव्द, जुन खालको सृजना हुनुपर्नेहो नेपालको गितसंगित क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । फिल्ममा जस्तै अपशव्दको प्रयोग यहाँ वढि भयो । त्यस्ता खालका मान्छेहरु यहाँ स्वार्थका लागी आएका हुन भन्न सजिलै सकिन्छनी त ।
आफुलाई कुन गितवाट चिनाउन चाहानुहुृन्छ ?
– ‘आसुँमा डुवाउन्न भन्थ्यौं’, ‘आकाशैका तारा झारीदिन्छु भन्दिन म’, दवाव चलचित्रवाट ‘पावरफुल वैसको झड्काले’ , ‘तिम्लाई आफ्नो वनाउने, र अहिले एकदमै चर्चामा रहेको गित ‘यो जुनीमा तिम्रो’ वाट आफुलाई चिनाउन चाहान्छु । तर श्रोताहरुले अन्य गितहरु पनि उत्तीकै सुन्नुभएको छ । खुसी लाग्छ । उहाँहरुको मायाँले अलिकति अगाडी वढेर काम गर्नुपर्छ है भन्ने प्रेरणा पनि जागेर आउँछ ।
गितंसंगित क्षेत्रमा पैसा छ कि छैन ?
– पैसा नभएको हैन जत्ति पनि छ । तर गायकहरुका लागी चाहि त्यसरी पुर्ण रुपमा आशा गर्नेवाटो वनिसकेको छैन । अहिले सामान्य मात्रामा मोटामोटी सिआरविटी, पिआरवीटीमा केही त्यस्तो सम्झौता हुने र नयाँ खालका कानुन निर्माण वन्ने क्रममा भएपनि हामीलाई चाहि अलिकति गाह्रै छ भन्नुपर्छ ।
गाह्रो हुदाँहुदै किन आउनुुुुभा यो क्षेत्रमा ?
– मेरो हिसावमा म साच्चीकै भन्नेहो भने मेरो रहरले भन्दा पनि समाज, स्कुल, घरपरिवारको वढि दवावमा आएको हुँ । गितसंगित वढि गुनगुनाउने भएपनि गायकनै वन्छु भनेको थिएन । राम्रो गाउँछस् गायकनै वन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो सवै त्यही भएर आएको हुँ । त्यसो त कोही मान्छेको रुची विना उसले कुनैपनि काम सम्पन्न गर्दैन भन्छन् । त्यस्तै मेरो पनि यसप्रतिको लगाव, ईक्षाशक्ती वढिनै छ । यस क्षेत्रमा व्यस्तनै छु म पनि । भुमी, एल्वमहरुका गितहरुमा पनि स्वर भर्न पाएको छु । विभीन्न अवार्डहरुमा र प्रोगामहरुमा पुग्दा ठिकै छ मेरा लागी कमाई । तर साच्चीकै गायक र कलाकारहरुले अहिलेको अवस्थामा पैसा कमाउन स्टेज चढ्नैपर्छ ।
वाच्ने आधारहरु अरु छैनन ?
– मैले पहिलानी भने, वाच्न गाह्रो छ । स्टेज कार्यक्रमले मात्रै वाच्छ कलाकार । सिआरवीटीवाट पहिला त्यत्ती पैसा आउन्नथियो । तर अहिले नयाँ सिस्टम लागु भएको छ । सिआरविटी अलिकति वढि आशा हो तर त्यो पनि सोचेजस्तो छैन ।